Ukuvalwa kweeNyununu zeNkatha zeNdalo zoBuntu Soie Hair Atlanta Ukuvalwa kweeNyununu zeNkatha zeNdalo zoBuntu Soie Hair Atlanta
Ukuvalwa kweeNyununu zeNkatha zeNdalo zoBuntu Soie Hair Atlanta - Soie Virgin Hair Extensions
Izinwele ze-Organic, ezingaguqukanga ze-VIRGIN. Izandiso zethu zeenwele ze-Kinky Curly zendalo zenziwa kwizinwele zabantu. Ezi zandiso zingabuye zilungiswe kwaye zinike ibukeka bomeleleyo, unyaka ohlala unyaka we-1 okanye ngaphezulu ngokunyamekela.
yethu endalo Ukuvalwa kweKinky Curlys zithengwa ngokuthe ngqo ukusuka eIndiya kwaye yenye yezona ziintlobo zeenwele ezingaphethekiyo kwiimarike. Zonke iimveliso zethu zivunwa kwiimeko zabo zendalo kwaye isiqalo ngasinye sivela kubaxhasi be-1-2 ukuqinisekisa ukuhambelana.